Usedwebe umugqa ngolukaMcCarthy neBafana umphathi waMaZulu - Impempe
Usedwebe umugqa ngolukaMcCarthy neBafana umphathi waMaZulu
Umengameli waMaZulu FC, uSandile Zungu usephumele obala ngamahlebezi aqhubekayo ayamanisa umqeqeshi wakhe, uBenni McCarthy nomsebenzi weBafana Bafana.
Exoxa neMpempe, uZungu uthe inhlangano eyengamele ibhola kuleli, iSouth African Football Association (Safa) ayikasho lutho kuye, kodwa wakubeka kwacaca ukuthi ngeke amdedele lo mqeqeshi noma ngabe ifika seyiguqe ngamadolo.
“Abakaze beze kimi. Ngisafunde khona kwabezindaba nje ngalento. Ngihoshe nomoyana wokuthi iSafa inyenyile yayoxoxa nomphathi kaBenni uRob Moore. Kodwa ngeke bamthole.
“Ngeke simdedele ngoba sinezivumelwano eziqinile naye,” kuchaza uZungu osenze izinguquko ezibonakalayo Osuthiwini kusukela aluthenga ekupheleni kwesizini edlule.
UMcCarthy usethathe Usuthu wakubeka endaweni yesibili kwiDStv Premiership la seluxine khona iMamelodi Sundowns okuyinto eqhwakele. Okokuqala ngaphansi kwePremier Soccer League AmaZulu kuphela isizini engabangwa nezibi.
UMcCarthy ngomunye wabaqeqeshi abanombolwe yiSafa ethungatha umqeqeshi kulandela ukuthi idedele uMolefi Ntseki ohlulwe ukufaka leli qembu emidlaweni ye-Africa Cup of Nations.
Nokho impempe.com ihoshe ukuthi ophambili ohlwini lweSafa nguPitso Mosimane okwi-Al Ahly njengananje.
Funda lolu daba: https://bit.ly/2OBOUod
Kuzobanzima ukuthola uMosimane kwazise usemkhankasweni wokuwina isicoco seCaf Champions League okwesithathu.
ISafa imdinga ngokushesha umqeqeshi njengoba kuzoqala imidlalo yokuhlungela iNdebe yoMhlaba ngoJulayi.
Imizamo yokuxhumana noMoore ayiphunelelanga njengoba ucongo ubengalubambi kanti nomlayezo we-email athunyelelwe wona ubengakawuphenduli.
Previous Previous post: Ifuna igoli kodwa ayinamgadli iChiefs
Next Next post: OweChippa ufuna ukuvuka ngeSundowns